Ho hita taratra amin’ny morontsiraka Atsinanana manontolo izany ka hisy ny orana somary matevina hirotsaka. Handrahona arahina erika indraindray kosa ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany, raha efa hatsiaka be no hisantarana izany amin’izao fiandohan’ny herinandro izao. Ho maina kosa ny andro any amin’ny faritra sisa. Etsy an-danin’izay, ho mafy ihany ny koa ny fitsokan’ny rivotra saika manerana ny Nosy fa hihamalefaka sy ho maina ny andro any amin’ny faran’ny herinandro. Hahitana fidinany avokoa vokatr’izany ny maripana amin’ny ankapobeny. Somary hafana anefa amin’ny faran’ny herinandro. Tsy dia hiova firy moa ny tarehimariky ny maripana amin’ny faritra hafa. Nanodidina ny [10- 22°C] ny maraina raha manodidina ny [20- 32°C] kosa ny folakandro.